ရိုးရိုးမွေးမယ့်မိခင်များအတွက် – Burmese Baby
Web Master | May 21, 2017 | Articles, Health | Comments
ရိုးရိုးမွေးထားသူမိခင်များအနေနဲ့ အောက်ပါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို သိထားသင့်ပါတယ်။
1. သွေးပေါင်ချိန်နှင့် သွေးခုန်နှုန်းစစ်ဆေးခြင်း
ကလေးမွေးထားတဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ သွေးဖိအားကို ပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သွေးပေါင်အတက်အကျဟာ သွေးသွန်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် သွေးတိုးခြင်း စတဲ့ရောဂါတွေကို ရှာဖွေရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးနောက် သွေးခုန်နှုန်းဆက်လက်မြန်နေပါက ဒါဟာ သွေးကုန်ဆုံးနေခြင်း၊ သွေးအားနည်းနေခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ သွေးလန့်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
2. သွေးလိုအပ်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
အမျိုးသမီးအများစုအနေနဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားစဉ်မှာချက်ချင်းဆိုသလို သွေး 500 မီလီလီတာဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးလိုတဲ့အခါသွေးသွင်းဖို့အဆင်သင့်ရှိအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးနောက် သွေးသွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူများက သင့်သားအိမ်လမ်းကြောင်းမှာ သွေးထွက်မှုပမာဏနဲ့ သားအိမ်ကျုံ့နိုင်မှုအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အကြာ သွေးဆုံးရှုံးမှုနည်းနည်းစီဆက်လက် ဆင်းနေမှာပါ။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ သွေးခဲကြီးကြီးမားမားဆင်းတယ်လို့ သတိထားမိပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူအား ချက်ချင်းအသိပေးသင့်ပါတယ်။
သားအိမ်လမ်းကြောင်းမှ အကျိအချွဲတွေဟာ သွေးနဲ့အတူစီးဆင်းလာပြီး စစချင်းမှာ ၎င်းအကျိအချွဲတွေရဲ့အရောင်ဟာ အနီရောင်ဖြစ်နေမှာပါ။ တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ သွေးဆင်းမှုတဖြည်းဖြည်းရပ်သွားကာ အချွဲတွေရဲ့အရောင်ဟာအဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် အ၀ါရောင်သမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးချိန်မှာသွေးဆင်းလိုက်၊ ရပ်လိုက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့သွေးခဲနဲ့အတူဒါမှမဟုတ် သွေးခဲမပါဘဲအနီရဲရဲအကျိအချွဲတွေ့ရှိပါက သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူအား အသိပေးသင့်ပါတယ်။
4. မိန်းမကိုယ်နာကျင်မှုအတွက် ကုသခြင်း
ကလေးမွေးပြီးနောက် မိန်းမကိုယ်ဟာ နီမြန်းနာကျင်နေတတ်ပါတယ်။ ရေခဲကပ်ပေးခြင်း (သို့) ကြက်သီးနွေးရေ (ရေနွေးပူ မဟုတ်ပါ) ထဲ 10-15 မိနစ်ခန့် ထိုင်ပေးခြင်းဖြင့် အနာကျက်စေကာ နာကျင်မှုလျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။
မီးဖွားပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာ အားအင်ကုန်ခမ်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပင်ပန်းနွမ်းလျမှုတွေကြောင့် သင့်အနေနဲ့ စိတ်အားငယ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်စိတ်ပြန်လည်လန်းဆန်းလာစေဖို့နဲ့ နို့ထွက်ကောင်းစေဖို့ ကောင်းစွာအနားယူပေးသင့်ပြီး သင့်ခင်ပွန်း၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်များရဲ့ ပြုစုယုယမှုကိုခံယူကာ အားအင်ဖြည့်တင်းသင့်ပါတယ်။ ဧည့်တွေ့ချိန်ကိုသီးသန့်ထားကာ ကောင်းစွာအိပ်စက်အနားယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
6. မီးဖွားပြီးချိန်တွင် ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုရှိစေခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပြီး ဆီးအိမ်ဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်မှ လျော့နည်းစေကာ ၀မ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ အခြားသောကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
7. မွေးဖွားပြီးပြီးချင်း သားအိမ်အခြေအနေအား စောင့်ကြည့်ခြင်း
၀မ်းဗိုက်အရွယ်အစားဟာ မီးဖွားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းလျော့ကျသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်းမှာ သားအိမ်ကကြီးမားနေဆဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှ သားအိမ်ဟာ တဖြည်းဖြည်းကျုံ့လာပါတယ်။ ဒီလိုသားအိမ်ကျုံ့နေချိန်မှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာကို ခံစားရနိုင်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာမှသာ သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်အကြာမှာတော့ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်အချိန်က သားအိမ်အရွယ်အစားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
8. ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း သားအိမ်ခေါင်းကျဉ်းလာခြင်း
မီးဖွားပြီးနောက်မှာ သားအိမ်ခေါင်းဟာ လက်နှစ်ချောင်းစာခန့်ကျယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းလာတာနဲ့အတူ အသားပါထူလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးမမွေးမီအချိန်က သားအိမ်ခေါင်းအရွယ်အစားလောက်ကျဉ်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
9. ဆီးသွားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
မွေးဖွားစဉ်မှာ မိခင်ကိုယ်တိုင်အားစိုက်မွေးထားခြင်းကြောင့် ဆီးအိမ်မှာဆီးမရှိတော့ခြင်း၊ ဆီးဆိမ့်ထွက်နေခြင်း စတဲ့ဆီးအိမ်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဆီးသွားတဲ့အခါ ဆီးအကုန်သွားဖို့ အခက်အခဲရှိလာနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်နေစေကာမူမီးဖွားပြီးနောက် ဆီးသွားပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ ဆီးသွားပေးမှသာ သင့်ရဲ့ဆီးအိမ်ကြွက်သားကို ပြန်လည်ထိန်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ဆီးအိမ်မှာဖိအားသက်ရောက်မှုမရှိစေဖို့ နာရီအနည်းငယ်ကြာတိုင်းဆီးသွားပေးသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဆီးသွားရခက်ခဲနေပါက ရေများများသောက်ပေးခြင်း၊ ဆီးသွားတဲ့နေရာကို ရေကြက်သီးနွေးဖြင့်ဆေးပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်မှ ရှစ်ပတ်အကြာမှာ ဆီးသွားနှုန်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
10. ဗိုက်သားပျော့တွဲခြင်းနှင့် ဗိုက်ကြောပြတ်ရာများဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာ ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကိုဆွဲဆန့်ထားရခြင်းကြောင့် မီးဖွားပြီးချိန်မှာ ၀မ်းဗိုက်သားများပျော့အိကျလာကာ ဗိုက်ကြောပြတ်ရာများ ပိုမိုထင်ရှားစွာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမွေးပြီးနောက်မှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ သာမန်အားဖြင့် သွေးဆုံးရှုံးသွားခြင်းတို့ကြောင့် အထူးသဖြင့်ညဘက်တွေမှာ ချွေးထွက်လွန်တတ်ပါတယ်။ ဖျားနာခြင်းမရှိပါက ချွေးထွက်ခြင်းက စိုးရိမ်ပူပန်စရာကိစ္စတစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။
12. မီးဖွားပြီးနောက် အမျိုးသားနှင့်အတူနေခြင်း
ရက်သတ္တပတ်6ပတ်ကြာချိန်မှာတော့ အမျိုးသားနဲ့အတူနေလို့ ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး သန္ဓေတားနည်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြုထားဖို့လိုပါတယ်။
13. မီးဖွားပြီးနောက် မီးယပ်သွေးပေါ်ခြင်း
ကလေးကို နို့တိုက်ကျွေးခြင်းမရှိပါက ရက်သတ္တတပတ်6ပတ်မှ 8 ပတ်အကြား ရာသီပြန်လာနိုင်ပြီး နို့ချိုတိုက်ကျွေးပါက2လ မှ 18 လအတွင်း မည်သည့်အချိန်မှာမဆို မီးယပ်သွေးပေါ်နိုင်ပါတယ်။ နို့တိုက်ကျွေးနေသူအမျိုးသမီးများအနေနဲ့ သားဥကြွေခြင်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေနည်းပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေအခွင့်အလမ်းများနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
14. ရက်သတ္တပတ်ခြောက်ပတ်အတွင်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း
မီးဖွားပြီးနောက်4ပတ်မှ6ပတ်အတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများက အောက်ပါအချက်တွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
3) သားအိမ်အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ တည်နေရာ
4) သားအိမ်ခေါင်းနှင့် မိန်းမကိုယ်အခြေအနေ
5) ခွဲစိတ်ရာဒါမှမဟုတ် စအိုစပ်အားစစ်ဆေးခြင်း
6) ရင်သားအခြေအနေ စတာတွေကိုစစ်ဆေးပေးပြီး လိုအပ်တာတွေကိုညွှန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။